ပေါ်တူဂီဘာသာစကား (နှင့်အခြားဘာသာစကားများ) တွင်နာမ်စားများရှိသည် variable စကားလုံးများ ၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့် နာမ်နှင့်အတူလိုက်ပါမရ။ ၎င်းတို့ကိုသုံးသည်။
စကားရည်လုပွဲ (သို့) မိန့်ခွန်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သူများကိုညွှန်ပြပါ
နာမ်စားတွေရဲ့အသုံးဝင်မှုကဒါပဲ စာသားများအားလိုက်လျောညီထွေမှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ပေးရန်ခွင့်ပြုပါသူတို့ကအမိန့်၊ အကြောင်းအရာနဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်ငါတို့ကိုသူတို့မျှဝေချင်တဲ့သတင်းစကားကိုနားလည်ဖို့ကူညီပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ကူညီပေးတယ်။
persona နာမ်စား (ပေါ်တူဂီ) စပိန်ဘာသာပြန်ချက်)
Primera Meu၊ minha၊ meus၊ minhas ငါ့၊ ငါ့၊ ငါ့၊ ငါ့ရဲ့
ဒုတိယ Teu၊ မင်း၊ မင်း၊ မင်း မင်း၊ မင်း၊ မင်း၊ မင်း
တတိယ Seu, sua, seus, suas သူ့၊ သူ့၊ သူ့၊ သူ့
Primera Nosso, nossa, nossos, nosas ငါတို့၊ ငါတို့၊ ငါတို့၊ ငါတို့
ဒုတိယ ဗာ့ဆို၊ ဗို့စ်၊ ဗို့စ်၊ ဗို့စ် မင်း၊ မင်း၊ မင်း၊ မင်းရဲ့
ဒီအိမ်ကငါ့အိမ်ပါ. ထိုအိမ်သည် minha ဖြစ်သည်
မင်းရဲ့အိမ်တွေကသပ်ရပ်တယ်။ Vossas sãoလှပသောအိမ်များ
ပေါ်တူဂီဘာသာစကားတွင်အကန့်အသတ်မရှိသောနာမ်စားများဟုခေါ်သောလူများ၊ အရာများ (သို့) အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြသောဥပမာများကိုလည်းသုံးသည်။
အချို့၊ အချို့၊ အချို့၊ အချို့၊ အချို့၊ အချို့
သေချာသည်၊ သေချာသည်၊ သေချာသည်၊ သေချာသည်
Nenhum, nenhuma: မရှိပါ၊ မရှိပါ
ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်: ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်
အများကြီး၊ အများကြီး၊ အများကြီး၊ အများကြီး၊ အများကြီး၊ အများကြီး၊ အများကြီး
အများအပြား၊ အများအပြား၊ အများအပြားနှင့်အများအပြား
Muito, muita, muitos, muitas: အများကြီး၊ အများကြီး၊ အများကြီး
Pouco, pouca, poucos, poucas: နည်းနည်း၊ နည်းနည်း၊ နည်းနည်း၊ နည်းနည်း
Outro, outra, outros, outras: အခြား၊ အခြား၊ အခြားသူများ
အားလုံး၊ အားလုံး၊ အားလုံး၊ အားလုံး၊ အားလုံး၊ အားလုံး၊ အားလုံး
သူမသည်လှပသည်မှန်သည် : သူမသည်ချစ်စရာကောင်းသည်မှာအမှန်ဖြစ်သည်
တိုက်ခန်းတွင်မည်သူမဆိုနေထိုင်နိုင်သည်: အရည်အချင်းစစ် um pode viver no chão
ပေါ်တူဂီအမေးအဖြေများကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေသီးခြားမေးခွန်းများမေးရန်သုံးသည်။
Quem လား။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့?
စိန်ခေါ်ချက်နာမ်များသည်ဝါကျ၌ဘာသာရပ်များကိုထင်ရှားစေသောလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုဘာသာရပ်အလိုက်အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်၊ အနည်းကိန်း (သို့) အများကိန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်းသုံးသည်။
ele, ela: သူသို့မဟုတ်သူမ
eles, elas: သူတို့နှင့်သူတို့
ငါကပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ: Eu sou uma pessoa profissional ဖြစ်သည်
သူတို့ဒီညလာမယ်: ဒီည Eles virão
သရုပ်ပြနာမ်စားများသည်ဝါကျတစ်ခုတွင်ပြောသောသူနှင့်အမြဲတစေဆက်နွယ်မှုတည်ရှိမှုကိုသိရန်ပေါ်တူဂီသဒ္ဒါတွင်သုံးသောအရာများဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုပြောရကျိုးနပ်ပါတယ် ပေါ်တူဂီတွင်သရုပ်ပြနာမဝိသေသနမရှိပါ.
အမျိုးသားအရှေ့- (ဤ) Esse- (that) That- (that)
Feminino Esta- (ဤ) Essa- (that) That- (that)
Male Estes- (ဒါတွေ) Esses- (အဲဒါတွေ) အဲဒါတွေ (အဲဒါတွေ)
Feminino These- (ဒါတွေ) Essas- (အဲဒါတွေ) အဲဒါတွေ (အဲဒါတွေ)
ပေါ်တူဂီ၌နှိုင်းယှဉ်နာမ်စားများကို Variables များနှင့် invariables များအဖြစ်ခွဲခြားထားပြီးအောက်ပါတို့မှာ
ဒါမှမဟုတ်မင်းကဘာလဲ။ ဘယ် ဘယ်
cujo cujos: ဘယ်သူ့ရဲ့
qua as quais: ဘယ်ဟာလဲ
ဘယ်နှစ်ယောက်၊ ဘယ်လောက် ဘယ်လောက်ပါလဲ ဘယ်လောက်လဲ
cujo cujos cuja cujas ဘယ်သူ့၊ ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူလဲ
သတင်းစာသည်အောင်မြင်သော၊ ဂုဏ်သတင်းရှိသောသတင်းများကိုတင်ဆက်သော: ဂုဏ်သိက္ခာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသော O jornal é bem ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်
ဤအရာသည်ယနေ့အတွက်သာဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပေါ်တူဂီနာမ်စားများအတွက်လမ်းညွှန်သည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိပြီးလွယ်ကူပြီးလုံးဝအခမဲ့နည်းလမ်းများဖြင့်ဘာသာစကားများကိုဆက်လက်သင်ယူရန်စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးရန်သတိရသည်။ အဆုံးသတ်ရန်၊ ပေါ်တူဂီဘာသာစကားဖြင့်နာမ်စားအသံထွက်ကိုကူညီမည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချန်ထားပါ။
categories ဘာသာစကား, ပေါ်တူဂီ လက်မှတ်အညွှန်း
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဘာသာစကား » ပေါ်တူဂီ » ပေါ်တူဂီတွင်အသံထွက်များ: အသံထွက်နှင့်ဥပမာများ
ပေါ်တူဂီတွင်နံပါတ်များမှ ၁ မှ ၁၀၀ အထိ
ပေါ်တူဂီစကားတွင်အသံထွက် ၁ မျိုး၊ အသံထွက်နှင့်ဥပမာများ
14:2019 pm မှာဇူလိုင်လ 3, 01